Ukunikela Kumsebenzi WamaNgqina KaYehova Owenziwa Ehlabathini Lonke
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Itali IsiBhulu IsiBislama IsiCambodia IsiChitonga IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiDangme IsiDrehu IsiEwe IsiFrentshi IsiGa IsiGarifuna IsiGreenland IsiKikaonde IsiKikongo IsiKimbundu IsiKongo IsiKwangali IsiKwanyama IsiLaotia IsiLingala IsiLunda IsiLuvale IsiMaltese IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele IsiNdonga IsiNgabere IsiNgesi IsiNyaneka IsiNzema IsiOtetela IsiPhuthukezi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseCuzco) IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiTahiti IsiTotonac IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTwi IsiUmbundu IsiVenda IsiXhosa IsiZulu isiWallisian
UYEHOVA nguThixo ophayo. (Yakobi 1:17) Oku sikubona kwindalo yakhe yeenkwenkwezi ezizalise isibhakabhaka, nezityalo ezihombise umhlaba.—INdumiso 65:12, 13; 147:7, 8; 148:3, 4.
Umbhali weNdumiso 104 wayenoxabiso olukhulu ngayo yonke indalo kaYehova, ngoko wabhala ingoma yokumdumisa. Xa ufunda loo ndumiso, ngaba nawe unoxabiso njengomdumisi? Wathi: “Ndiza kumvumela uYehova ubomi bam bonke; ndiza kumculela uncuthu lwengoma uThixo wam logama nje ndisekho.” (INdumiso 104:33) Wena awufuni kwenza oko?
OWONA MZEKELO MKHULU WOKUPHA
UYehova ufuna sixelise umzekelo wakhe wokupha. Ibe usinike izizathu ezihle zokuba nathi siphe. Waphefumlela umpostile uPawulos ukuba abhale athi: “Bayale abo bazizityebi kule nkqubo yezinto ukuba bangaziphakamisi, bangathembeli kubutyebi obungaqinisekanga, kodwa mabathembele kuThixo, osinika zonke izinto ngokobutyebi ukuze sizinandiphe; mabenze okulungileyo, batyebe emisebenzini emihle, bangagogotyi lutho, balungele ukwabelana, ngokwenjenjalo baya kuba baziqwebela isiseko esihle nesikhuselekileyo sekamva, esikhokelela kubomi benene.”—1 Timoti 6:17-19.
Kwileta yakhe yesibini eyayisiya kwabaseKorinte, uPawulos wachaza indlela esimele siphe ngayo. Wathi: “Ngamnye makenze kanye njengoko egqibile entliziyweni yakhe, kungekhona ngokukrokra okanye ngokunyanzelwa, kuba uThixo uthanda umphi ochwayitileyo.” (2 Korinte 9:7) Ngubani esimncedayo xa sisipha? UPawulos wathi sinceda abanye ngokubanika oko bakudingayo, kodwa nathi siyancedakala kuba uYehova uya kusisikelela.—2 Korinte 9:11-14.
Emva koko, uPawulos wathetha ngesipho esikhulu sikaThixo wathi: “Makubulelwe kuThixo ngenxa yesipho sakhe sesisa esingathethekiyo.” (2 Korinte 9:15) ‘Isipho sesisa’ sikaYehova siquka zonke izinto ezintle asinika zona ngoYesu Kristu. Siswele amazwi okuchaza indlela esixabiseke ngayo esi sipho.
Singabonisa njani ukuba siyakuxabisa oko uYehova noYesu basenzele kona, nabaseza kukwenza? Singabonisa ngokuthi sinikele ngexesha lethu, amandla ethu, nangezinto zethu eziphathekayo ukuze zisetyenziselwe ukunqula uYehova nokunceda abanye bafunde ngaye. Singakwenza oku enoba sizizityebi okanye siswele.—1 Kronike 22:14; 29:3-5; Luka 21:1-4.
NjengamaKristu enkulungwane yokuqala, abaninzi namhlanje babekela bucala imali yomsebenzi owenziwa ehlabathini lonke, baze bayifake kwibhokisi yeminikelo esebandleni labo. (1 Korinte 16:2) Nyanga nganye, amabandla athumela le minikelo kwiofisi yamaNgqina kaYehova ekwilizwe lawo. Unako ukuyithumela ngokuthe ngqo iminikelo kumbutho osemthethweni osetyenziswa ngamaNgqina kaYehova kwilizwe okulo. Ukuze wazi igama laloo mbutho nceda uye ku-www.jw.org/xh uze uqhagamshelane neofisi yasekuhlaleni yamaNgqina kaYehova. Nazi iindlela onokunikela ngazo:
Yiminikelo eyenziwa ngebhanki, ngekhadi ledebhithi okanye lekhredithi. Kwamanye amasebe, kunokusetyenziswa u-jw.org okanye enye iwebhsayithi.
Yiminikelo yemali enemiqathango yokuba uphinde uyibuyiselwe xa uyidinga.
Bhala ileta echazayo ukuba lo mnikelo unemiqathango.
EZINYE IINDLELA ONOKUNIKELA NGAZO
Apha ngezantsi kudweliswe ezinye iindlela onokunikela ngazo ukuze uxhase umsebenzi wokushumayela owenziwa ehlabathini lonke. Ngaphambi kokuba unikele, nceda uqhagamshelane neofisi yesebe enyamekela ilizwe lakho ukuze wazi ukuba yiyiphi iminikelo eyamkelekileyo kwindawo ohlala kuyo. Imigaqo kunye nemithetho yerhafu iyahluka kwiindawo ngeendawo, ngoko buza umntu onolwazi ngaphambi kokuba unikele.
I-inshorensi: Ngumnikelo owenziwa ngokubhalisa umbutho osetyenziswa ngamaNgqina kaYehova njengomele ufumane imali yeinshorensi xa uye wasweleka okanye wadla umhlala-phantsi.
Iiakhawunti Zebhanki: Iiakhawunti zebhanki, izatifiketi zedipozithi, okanye iimali zomhlala-phantsi zinokuhlawulwa ngqo kumbutho osetyenziswa ngamaNgqina kaYehova xa uye wasweleka, ngokuvisisana nemithetho yeebhanki zasekuhlaleni.
Imali Eselugcinweni Neebond: Umntu unokunikela ngokuthe ngqo ngemali eselugcinweni neebond kumbutho osetyenziswa ngamaNgqina kaYehova. Unokwenza isivumelwano sokuba loo mali idluliselwe kumbutho xa esweleka.
Izindlu Nemihlaba: Ukuba umntu unendlu okanye umhlaba anokuwuthengisa, unokunikela ngawo kumbutho osetyenziwa ngamaNgqina kaYehova. Ukuba uhlala kuloo mhlaba, unokwenza isivumelwano sokuba aqhubeke ehlala apho de asweleke.
Umnikelo Onembuyekezo: Umntu unokunikela ngemali kumbutho osetyenziswa ngamaNgqina kaYehova aze enze isivumelwano sokuba abuyekezwe isixa esithile semali nyaka ngamnye ngoxa esaphila. Usenokwehliselwa irhafu yakhe ngenxa yeso sixa semali anikele ngaso.
Iminqophiso Yamafa: Umntu unokwenza amalungiselelo okuba kunikelwe ngezinto zakhe okanye imali yakhe xa efile. Unokukwenza oku ngokubhala ileta echaza ukwabiwa kwamafa okanye isivumelwano esigunyazisa umbutho osetyenziswa ngamaNgqina kaYehova njengomele ufumane ilifa. Ngenxa yoko usenokwehliselwa irhafu yakhe.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngendlela yokunikela kumsebenzi wamaNgqina kaYehova owenziwa ehlabathi lonke usenokufunda incwadana enemifanekiso ethi Charitable Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide, ephume ngesiNgesi nangeSpanish. Le ncwadana ichaza iindlela ezahlukeneyo umntu anokunikela ngazo. Inkcazelo ekuyo isenokungasebenzi ngokupheleleyo kwimeko yakho ngenxa yemithetho yerhafu okanye eminye imithetho yelizwe lakho. Ngoko emva kokufunda le ncwadana, ufanele uthethe nomcebisi wakho wezomthetho. Abantu abaninzi baye bafak’ isandla ekuxhaseni umsebenzi owenziwa ehlabathini lonke, baza bafumana iingenelo zerhafu ngokuthi banikele ngenye yezi ndlela. Ukuba le ncwadana iyafumaneka kwilizwe lakho, unokuyicela kunobhala webandla lasekuhlaleni.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, usenokuqhagamshelana neofisi yamaNgqina kaYehova yasekuhlaleni.